MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Archbishop Paul Tschang In-Nam as Apostolic Nuncio of the Holy See to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok
by adminmofa on 02/08/2017 at 5:35 PM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Archbishop Paul Tschang In-Nam as Apostolic Nuncio of the Holy See to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
H.E. Archbishop Paul Tschang In-Nam was born on 30th October 1949 in Seoul, Republic of Korea. He was ordained to the priesthood on 17th December 1976 in Cheongju, Republic of Korea and consecrated asaBishop on 6th January 2003 in Rome. He graduated from Catholic University of Kwang-Ju and obtainedaDoctorate in Theology at Pontifical Lateran University in 1985. He earnedalicentiate in Canon Law at Pontifical University of St.Thomas, Rome in 1984. He also graduated from the Diplomatic Institute of the Holy See, Rome in 1985. He joined the Diplomatic Service of the Holy See on 1st May 1985. He has served at the Apostolic Nunciatures in El Salvador, Ethiopia, Syria, France, Greece and Belgium in various capacities till 2002. He also served as the Apostolic Nuncio to Bangladesh from 2003-2007 and Uganda from 2007 to 2012. Since 2012, he has been serving as Apostolic Nuncio to Thailand and Cambodia and Apostolic Delegate to Myanmar and Lao PDR.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် Archbishop Paul Tschang In-Nam အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဗာတီကန်မြို့ပြနိုင်ငံ (Holy See) သံအမတ်ကြီး (Apostolic Nuncio)အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
Archbishop Paul Tschang In-Nam ကို ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ချုံးဂျူမြို့၌ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ခံယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရောမမြို့၌ ကက်သလစ် ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့ သည်။ Archbishop Paul Tschang In-Nam သည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂွမ်ဂျူမြို့ရှိ ကက်သလစ်ဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရောမမြို့ရှိ Pontifical Lateran တက္ကသိုလ်မှ ဓမ္မသင်းညိုပညာဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် St. Thomas တက္ကသိုလ်မှ ကာနွမ်ဥပဒေ ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် Holy See ၏ သံတမန်ရေးရာကျောင်း တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် Holy See ၏ သံတမန်ဝန်ထမ်းလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ ပြီး၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ အယ်လ်ဆာဗေးဒိုး၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိနှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတို့ရှိ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်သီတင်းသုံးရာ သံရုံးများ၌ ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ Holy See သံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ Holy See သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ Holy See သံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် (Apostolic Delegate)အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါ သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂ ရက်